Ukusekelwa okungaguquki kwamadolo okungu manzi kwe-neoprene China Manufacturer
Incazelo:Joyina Ukusekelwa Knee Pad,Knit Knee Support,Heat Knee Support
 HomeImikhiqizoStrap SupportUkuxhaswa KneeUkusekelwa okungaguquki kwamadolo okungu manzi kwe-neoprene
Ukusekelwa okungaguquki kwamadolo okungu manzi kwe-neoprene
I-Model No.: HXW-K13
UKUSEKELWA KANYE NOKUKHOLWA KWAKHO: Lesi ukusekelwa okuphelele kwedolo kubantu abaphethwe yizinhlungu eziqhubekayo nezisematheni edolweni. Inhloso yawo ukudambisa izinhlungu zedolo futhi kunikeze ukusekelwa okuhle. Njengokuxhaswa kwedolo, kunganciphisa izinhlungu, kunciphise izinhlungu zemisipha, kuthuthukise ukuzivocavoca komzimba futhi uzethembe futhi.
Ikhwalithi enethezekayo: lo brace wokuxhasa idolo wenziwe nge-neoprene esezingeni eliphakeme eliphezulu, elilungele umsebenzi osindayo. Ngenxa yendwangu yayo yokuphefumula neyokujuluka, kanye nokuqina okuzinhlangothi-mbili zokuvikelwa okuphezulu, leli kneepad linikeza owembayo ukwesekwa okungcono nenduduzo engapheli. Jabulela ezemidlalo kangcono futhi uwenze ngcono.
Ibhande lokusekela ledolo eliguqukayo: ukucindezelwa kwamadolo kungaguqulwa ngokukhululekile ngokusebenzisa amabhande amabili we-hoops ne-loop, okulula kakhulu ukuwasebenzisa. Vele ugoqe idolo ezungeze idolo bese usebenzisa amabhande ama-2 alungele ukulihlehlisa ngokuthanda ukuze ufinyelele ukulungele nokuzijabulisa. Akusekho-bandage obukhulu elizungeze imilenze yakho ukuze uncibilike, noma isibambo esindayo sedolo ukuze kulimaze ukusebenza kwakho!
Singochwepheshe emikhiqizweni yezemidlalo neyempilo, efana nokuxhaswa kwamadolo, ukuxhaswa kwe-elbow, ukwesekelwa kwesandla, ukuxhaswa kwe-ankle, i-posture cosmetator, njll. Singahlangabezana nezidingo zakho ezenziwe ngezifiso ngosayizi, umbala, ilogo nokunye. Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.
Singumenzi wezemidlalo ongaphandle onekhono leminyaka eminingi yokukhiqiza nokuhlangenwe nakho kokuthengisa emikhiqizweni ehlukahlukene yangaphandle yemidlalo. Imikhiqizo yethu ye-neoprene ifaka kepha ayinqunyelwe i-posture corrector, i-band okhalweni, ukwesekwa kwe-elbow, ukwesekwa kwamadolo, ukwesekwa kwesandla nokunye. Sizimisele ukukhiqiza zonke izinhlobo zamadivayisi okuvikela impilo yakho.
Yini Izinzuzo Zakho?
1.Ungaphezu kweminyaka eyi-10 yesipiliyoni ekukhiqizeni nasekuthekeleni.
2. Uhlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi kanye nohlelo lokuphathwa kwamaketanga omuhle.
3. Factory intengo ngqo yokuncintisana.
4. Indlela enhle yokukhokha.
5. Impendulo esheshayo.
6. Ukulethwa kwezidingo ngokushesha.
7. Ikhono elihle lokukhulumisana.
8. Insizakalo ngemuva kokuthengisa.
9. Insiza yokuthenga eyodwa .
I-Advocate Neoprene evulekile kaPatella Acl Knee Brace Xhumana Nanje
UBlack Neoprene Hinged Knee Brace wesifo samathambo Xhumana Nanje
Joyina Ukusekelwa Knee Pad Knit Knee Support Heat Knee Support Ukusekelwa Knee Patella Ukusekelwa Knee Ngezintambo Ukusekelwa Knee Brace Neoprene Ezemidlalo Ukusekelwa Kwezemidlalo Ukusekelwa Komhubhe weCarpal